ကျ မ သိ ချင် သော လ က္ခ ဏာ အ ကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကျ မ သိ ချင် သော လ က္ခ ဏာ အ ကြောင်း
ကျ မ သိ ချင် သော လ က္ခ ဏာ အ ကြောင်း
Posted by aye.kk on May 18, 2012 in My Dear Diary | 25 comments
ကျ မ ငယ် ငယ် တုံး က တော့ ။ နွေ ရာ သီ ကျောင်း ပိတ် ရက် ရောက် လာ ပြီ ဆို သည် နှင့် နေ့ခင်း နေ ့လည် ဘက် ။ ထ မင်း စား ပြီး သည့် အချိန် များ တွင် ။ အိမ် အ လယ် ခန်း ထဲ ရှိ ကု တင် ပေါ် တွင် ။ နား နား နေ နေ လှဲ လျှောင်း တတ် မိ ပြီး ။ ရေ ဒီ ယို ဇတ် လမ်း ပမာ လေး များ အား နား ထောင် တတ် ပါ တယ် ။
ရေ ဒီ ယို ဇတ် လမ်း ပ မာ လေး များ နား ထောင် ရင်း ။ ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် များ အား ။ အ ပြင်း ပြေ အ မြဲ တ စေ ။
လေ့ လာဖတ် ဖြစ် ရှု လေ့ ရှိ ပါ တယ် ။
တ ခု တော့ ရှိ ပါ သည် ။ လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် ဖတ် ရင်း ။ ကိုယ့် လက် ဖ ဝါး ပြင် ပေါ် က အ ကြောင်း အ ရာ များ အ ပေါ် ။ စိတ် ဝင် စား ပြီး လေ့ လာ မိ ခြင်း က ။ ဦး ဆုံး အ ရင် ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ကျ မ ၏ လ က္ခ ဏာ အ ရေး အ ကြောင်း များ အား ။ ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် တွင် ။ ဖော် ပြ ပါ အကြောင်း များ အား တူ မ တူ လိုက် ကြည့် တတ် ပြီး ။ မ ကောင်း သည့် အ ရေး အ ကြောင်း များ ပါ ရှိ နေ တာ ကို ။ မိ မိ လ က္ခ ဏာ တွင် ပါ ရှိ သည် ကို တွေ့မြင် ရ ပါ က ။ စိတ် က မ ခံ စား နိုင် ပါ ။ စာ အုပ် ကို ရင် ပတ် ပေါ် တင် ပြီး ။ ဆက် မကြည့် တော ့ပါ ဘဲ ။ မျက် စိ စုံ မှိတ် ပြီး ။ အိပ် ပျော် သွား တတ် ပါ တယ်။ စိတ် ခံ စား မှု နု လွယ် သော် လည်း ။ ဝါ သ နာ ပါ သ ဖြင့် ။ မ ဖတ် ရဲ သော စာ မျက် နှာ များ အား ။ ချန် လှပ် ခါ ကျော် ခွ ပြီး ။ ဖတ် ဖြစ် တတ် နေ မြဲ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
မိ မိ ၏ ဘ ဝ ကု သို လ် ကံ အ ကျိုး ။ ဆိုး ကောင်း တို ့အား ။ သိ ချင် သည့် စိတ် ။ မိ ဘ တို့နှင့် ပတ် သက် ပြီး ။ အ ရမ်း ကို နား လည် ချင် နေ မိ သည့် စိတ် က တ ပိုင်း ဟု ။ ပြော ရ မ လား ကျ မ ကိုယ် ၌ က ဝေ ခွဲ မ ရ ရှိ နေ ပါ တယ် ။ သိ ချင် စိတ် ပြင်း ပြ နေ ၍ လည်း ။
ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် အား သဲ သဲ မဲ မဲ အ ချိန် ရ တိုင်း ။ ဖတ် နေ မိ ပါ တယ် ။
အ မ ဖြစ် သူ က လ က္ခ ဏာ ဝါ သ နာ အိုး ဖြစ် နေ ၍ လည်း ။ အ ပြင်း ပြေ ဖတ် ရန် စာ အုပ် များ က ။ လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် များ သာ အ များ အ ပြား အိမ် မှာ ရှိ နေ ရ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ တယ်။
ပြီး ရင် အ မေ ဈေး က ဝယ် ပါ လာ တတ် သည့် ။ ဘု ရား နိ ပါ တ် ဇတ် တော် လာ ပါ ရှိ သော ပုံ ပြင် စာ အုပ် လေး များ ပဲ ဖြစ် ပါ သည်။
ဖတ် လို့အ ရမ်း ကောင်း သည့် စာ အုပ် လေး များ ပင် ဖြစ် ပါ တယ် ။
အ ဖေ က က မ္ဘာ ကျော် စာ ရေး ဆ ရာ များ ရေး သား ထား သည့် ။ တ ထောင့် တ ည ပုံ ဝထ္ထု တို များ ။ မြန် မာ လို ပြန် ဆို ထား သည့် ဘာ သာ ပြန် စာ အုပ် များ အား ။ ဖတ် ရန် ဝယ် ထား ပေး သ ဖြင့် လည်း ။ နွေ ဦး ရာ သီ ကာ လ လေး များ က ၊ က လေး ဘ ဝ အ ရွယ် တွင် စာ ဖတ် ရင်း စိတ် ကြည် နှူး ပျော် ရွင် မှု များ ပိုင် ဆိုင် ရ ရှိ ခဲ့ ပါ တယ် ။
ပျော် ရွှင် ရ သည် ဆို သော် လည်း ။ မိ မိ လက် ဖ ဝါး ပြင် ရေ ဇာ နှင့် လ က္ခ ဏာ တွင် ပါ ရှိ လာ သော ။ ဆိုး ရွား သည့် အ ရေး အ ကြောင်း များ က ။ မိ မိ အား စိတ် တ စ္ဆေ အ ခြောက် ခံ နေ ရ သ လို မျိုး ။ ရံ ဖန် ရံ ခါ ဖြစ် နေ တတ် ပါ တယ် ။
ခံ စား ရ သ ဖြင့် လည်း မိ မိ လက် ဖ ဝါး ပြင် ပါ အ ရေး အ ကြောင်း တို ့အား တော် ယုံ နှင့် မ ကြည့် ဖြစ် ပါ။ လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် ကို တော့ လေ့ လာ မြဲ ဆက် လက် ဖတ် နေ မြဲ သာ ဖြစ် ပါ သည် ။ ပြီး လျှင် သူ ငယ် ချင်း လက် ဖ ဝါး များ နှင့် သာ လိုက် လံ ကာ တိုက် ဆိုင် လေ့ လာ ပြီး သူ ငယ် ချင်း များ အား လည်း ဟုတ် မ ဟုတ် မေး မြန်း ရ သည် မှာ ကျ မ အ ဖို ့အ လုပ် တ ခု လို ပင် ဖြစ် နေ ပါ တယ် ။
အ လယ် တန်း ကျောင်း သူ အ ရွယ် က လေး ရောက် ရှိ လာ အ ခါ မှာ တော့ ။ ကျောင်း ဖွင့် ပြီ ဆို သည် နှင့် ။ အား လပ် ချိန် ၊ မုန် ့စား ဆင်း ချိန် များ ၌ ။ သူ ငယ် ချင်း များ ၏ လ က္ခ ဏာ များ အား ကြည့် ပေး တတ် ပြီး ။ မ တတ် တ ခေါက် နှင့် တတ် သ လောက် ။ ပြော ပြ တတ် နေ ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။
သူ ငယ် ချင်း များ က မှန် သည် ဟု ပြော လျှင် လည်း ၊ ပြန် ပြော တတ် သည့် အကျင့် က ငါ ပြော တာ မ ဟုတ် ကိုင် ရို စာ အုပ် ထဲ က ကြည့် ပြီး ပြော တာ ဟု ပြော တတ် ပါ သည် ။
ဆ ဋ္ဌ မ တန်း ကျောင်း သူ ဘ ဝ ၌ ၊ ကျ မ နေ သော အ တန်း ထဲ တွင် သူ ငယ် ချင်း များ ၏ လေ့ ကျင့် ခဏ်း စာ အုပ် များ ၊ စာ မေး ပွဲ ဖြေ ဆို ခါ နီး အ ချိန် နှင့် တိုက် ဆိုင် လှ ခါ မ ကြာ ခ ဏ ပျောက် ဆုံး နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။
ထူး ခြား သည် က ကျ မ ၏ လေ့ ကျင့် ခဏ်း စာ အုပ် များ လုံး ဝ ပျောက် ဆုံး မှု မ ရှိ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည် ၊ ယူ တတ် သည့် သူ က လည်း ကျ မ စာ အုပ် တော့ လုံး ဝ လက် ရှောင် ခါ မ ယူ ခြင်း ပင် ဖြစ် ပါ သည် ။ ကျ မ လ က္ခ ဏာ ကြည့် တတ် နေ သည် ကို သူ သိ နေ ပုံ ပေါ် ပါ သည်။ ဘယ် သူ ငယ် ချင်း က မျှ လည်း သူ ယူ လိမ့် မည် ဟု မ ထင် မိ ကြ ပါ ။
ဘာ ကြောင့် လည်း ဟု မေး ရ မ လို ပင် ။ ဖြစ် မိ ကြ မှာ ကား ။ အ သေ အ ချာ ပင် ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူ က ကျ မ တို့အ တန်း ထဲ က အ တန်း ပိုင် ဆ ရာ ကြီး ၏ သ္မီး ဖြစ် ၍ နေ ခြင်း ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ သူ ငယ် ချင်း များ က ။ ကျ မ အား လ က္ခ ဏာ အား ။ တ ယောက် ခြင်း စီ ကြည့် ခိုင်း ခါ သူ ခိုး ဖော် ထုတ် ခိုင်း ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။
စာ အုပ် များ ယူ သည်ဟု ယူ ဆ ရ သူ က သူ့အ လှည့် မ ရောက် ခင် ပင် ဖျား သည် ဟု ဆို ခါ တ ပါတ် တိ တိ ကျောင်း လာ မ တက် တော့ ခြင်း ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
စာ မေး ပွဲ ဖြေ ဆို ရန် အ တွက် ခုံ များ စီ ရ သည့် နေ့။ ခုံ နံ ပတ် ရ ယူ ရန် လာ ရ သော နေ ့၌ ။ သူ ရောက် ရှိ လာ တာ သိ လိုက် ရ ပါ တယ် ။ သူ ့ကို မြင် တွေ့တာ ။ သူ ငယ် ချင်း များ က သ တင်း လာ ပေး ကြ ပါ တယ် ။
ကျ မ က သူ ့လက် ဖ ဝါး အား ပြ ရန် တောင်း ဆို မိ လိုက် ရ ပါ တယ် ။ သူ ငယ် ချင်း ရဲ ့မျက် နှာ အ မူ အ ရာ တ ချက် ပျက် သွား ပါ တယ် ။ သူ ၏ လက် ဖ ဝါး ပြင် အား ဘယ် ညာ နှစ် ခု စ လုံး အား ဖြန် ့ကြည့် သော အ ခါ သူ ၏ ညာ လက် ဖ ဝါး ပြင် လက် သန်း ခြေ ရင်း ဗုဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ ပေါ် တွင် ကြက် ခြေ ခတ် သေး သေး ငယ် ငယ် လေး ရှိ နေတာ ။ ထင် ရှား ပေါ် လွင် နေ တာ ကို တွေ ့မြင် ပါ တယ်။
မိ ကောင်း ဖ ခင် သား းသ္မီး ဖြစ် နေ လင့် က စား ။ လက် ဖ ဝါး ပြင် ရှိ ဗုဒ္ဓ ဟူး ဂြိုလ် ခုံ ။ လက် သန်း ရင်း အောက် တည့် တည့် ၌ ။ ထို ကြက် ခြေ ခတ် (x) အမြောက် သေး သေး လေး ပေါ် ပေါက် နေ သည့် အ ချိန် တွင် ။ သူ တစ် ပါး ပိုင် ဆိုင် သည့် ပစ္စည်း များအား ။ မိ မိ စိတ် မှ အ လို လို ခိုး ယူ ချင် နေ သည့် စိတ် တို ့ဖြစ် ပေါ် နေ ပြီး ။ မ ယူ ရ မ နေ နိုင် အောင် လောက် ပင် ။ စိတ် က ဖြစ် ပေါ် လာ တတ် သည် ဟု ။ ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ စာ အုပ် ထဲ ၌ ။ ဆို ထား သည် ကို ။ ကျ မ မှ လေ့ လာ မှတ် သား ထား မိ ပါ တယ် ။
ကျ မ က သူ ့လက် ဖ ဝါး အား ကြည့် ပြီး ။ နင် ယူ ထား သည် ဟု လ က္ခ ဏာ အ ရ စွပ် စွဲ ပြော ပြီး ။ သူ ငယ် ချင်း များ ၏ လေ့ ကျင့် ခဏ်း စာ အုပ် များ အား ပြန် ပေး စေ ချင် ကြောင်း ။ ပြန် ပေး လိုက် ပါ ။ စာ မေး ပွဲ နီး မှ လုပ် တာ ဟာ ။ နင် င ရဲ ကြီး မှာ မ ကြောက် ဘူး လား လို့ကျ မ က သူ ့ကို ပြော လိုက် မိ ပါ တယ် ။
ကျ မ စ ကား ပင် မ ဆုံး လိုက် ရ ပါ ။ ကျ မ အား ။ ရုတ် တ ရက် သူ့လက် ဖ ဝါး ဖြင့် ။ ကျ မ ၏ ပါး အား ရိုက် ခဲ့ ပြီး ။ နင် ငါ့ ကို သက် သေ မ ရှိ ဘဲ သူ ခိုး လာ မ စွတ် စွဲ နဲ ့…ပြော ပြီး ။ ကျ မ မှ အ ငိုက် မိ သွား ရ ခါ ။ ပါး ရိုက် ခံ လိုက် ရ ပါ တယ် ။ ကျ မ ရှက် စိတ် ဖြင့် မွန် ထူ နေ ပြီး သူ ယူ ထား သည် ဟု ပြော လိုက် မိ သော ကြောင့် ။သူ ငယ် ချင်း များ ၏ အား လုံး ရှေ့မှောက် ၌ မည် သို ့ဖြေ ရှင်း ပြ ရ မည် ကို
ကျ မ မ သိ တော့ ပါ ။
လ က္ခ ဏာ အ ကြောင်း နား မလည် သော သူ ငယ် ချင်း များ က လည်း ။ ကျောင်း ဆ ရာ (အ တန်း ပိုင် ) သ္မီး က ယူ ပါ့ မ လား ဟယ် ။ နင် ဒီ တ ခါ ဟော တာ တော့ ။ တက် တက် စင် တော့ လွဲ နေ ပြီ ။ လ က္ခ ဏာ က မ ယုံ ရ ဟု ပြော ဆို ကြ ခါ ။ တ ယောက် တ ပေါက် ထင် ကြေး များ ပေး ကြ ပါ တယ် ။ ကျ မ က တော့ ကိုယ့် ရှူး ကိုယ် ပတ် ပြီး ။ အ ရှူး မီး ဝိုင်း ပ မာ ပါ ဖြစ် ခဲ့ ရ ပါ တယ် ။ကျ မ အား ပြန် မ လုပ် ရန် လည်း ။ သူ ငယ် ချင်း တစ် စု က ဝိုင်း ဝန်း တား မြစ် ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။
သူ ငယ် ချင်း ဖြစ် သူ က တော့ ။ သူ့အ ဖေ
အ တန်း ပိုင် နှင့် တိုင် ကြား မည် ဟု ပြော ဆို ခါ ။ သူ့ကို အ ရှက် ခွဲ သည် ဟု ပြော ပြီး ။ ကျ မ အား မျက် ထောင့် နီ နီ ဖြင့် ။ မ ကျေ မ နပ် ဖြစ် လျှက် ။ စိုက် ကြည့် နေ ခဲ့ ပါ တယ် ။ အ တန်း ပိုင် ဆ ရာ က လည်း ။ သူ ၏ သ္မီး ဖြစ် သူ အား ယ ခု လို ပြော ရ ပါ့ မ လား ဟု ဆို ခါ ။ ကျ မ ၏ မိ ဘ များ ထံ တိုင် ကြား ပြော ဆို ခဲ့ ပါ တယ် ။
အ ဖေ က ။ ကျ မ အား ကျောင်း က ဖြစ် စဉ် နှင့် ပတ် သက် ပြီး ။ ကျ မ ကို မေး မြန်း ခဲ့ ပါ တယ် ။ ကျ မ ရှင်း ပြ မှု အား ။ အ ဖေ က သေ သေ ချာ ချာ နား ထောင် ပြီး ။ နောင် ထို ကဲ့ သို ့မ ပြု လုပ် ရန် ။ အ ဖေ က ဆုံး မ ခဲ့ ပါ တယ် ။ ကျ မ ၏ မ ကျေ နပ် မှု ကား ။ သူ့အ ပေါ် တွင် ပျောက် ဆုံး သွား ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပါ ။ ကိုင် ရို လ က္ခ ဏာ ။ စာ အုပ် တွင် ပါ ရှိ မှု မှာ ။ မှန် မ မှန် ။ လက် တွေ ့သိ လို သည့် စိတ် ။ ကျ မ ၌ ပြင်း ပြ လျှက် ရှိ နေ ခဲ့ ပြီး ။ သူ မ နေ ထို်င် ရာ အိမ် သို့သွား ရောက် ခါ ။ ကိုယ် တိုင် ကြည့် မြင် မည် ဟု စိတ် မှ ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ မိ ပါ တယ် ။
( ရုပ် ဝါ ဒီ ) အ လွန် ဆန် သည့် ကျ မ ၏ စိတ် က ။ ကျ မ ကို ဆုံးမ ပဲ့ ပြင် နိုင် ရန် ။ တ ကယ် မ လွယ် ပါ ။
အ ဖေ တား မြစ် သည့် ကြား မှ ပင် ။ စာ မေး ပွဲ လည်း ဖြေ ဆို နေ ပေ ပြီ ။ နောက် ဆုံး သ မိုင်း ဘာ သာ ဖြေ ဆို မည့် ရက် ။ ကြား ပိတ် ရက် ခံ နေ သ ဖြင့် ။ စာ ကို လည်း ဖြောင့် ဖြောင့် တန်း တန်း မ ကျက် နိုင် ခဲ့ ပါ ။
သူ မ နေ ထိုင် သည့် ။ အိမ် ရှိ ရာ ကို ။ စုံ စမ်း မေး မြန်း ပြီး ။ ကျ မ မှ သွား ရောက် ခဲ့ ပါ တယ် ။
အိမ်က နေ စက် ဘီး စီး နင်း မ ထွက် ခင် က တည်း က ပင် ။ အိမ် က ဘု ရား မှာ အ မှန် အ တိုင်း ဖြစ် စေ ရန် ဆု တောင်း မိ ပြီး ။ ညောင် ရေ အိုး ထဲ မှ ရေ များ အား ။ သ စ္စာ ရည် အ ဖြစ် ။ သောက် ခါ ထွက် သွား မိ ပါ တယ် ။ ကျ မ ကံ ကောင်း ခဲ့ ပါ တယ် ။ သူ နေ တဲ့ အိမ် ကို ဆိုက် ဆိုက် မြိုက် မြိုက် ရောက် ရှိ သွား ပြီး ။ သူ မ ၏ အ မေ အား အ ရင် ဦး ဆုံး တွေ့ရှိ ခဲ့ ပါ တယ် ။ ကျ မ က ကျက် စာ စာ အုပ် အ ခက် ခဲ ရှိ နေ သ ဖြင့် ။ သူ ၏ စာ အုပ် စင် အား ခ ဏ ကြည့် ရှု ခွင့် ပေး ပါ ရန် ခွင့် တောင်း ခံ လိုက် ပါ တယ် ။
သူ ၏ အ မေ က လည်း ။ ကျ မ အား ။ အိမ် မှာ ဟင်း ချက် ဖို ့ရာ ဆီ မ ရှိ သ ဖြင့် ။ သူ ငယ် ချင်း အား ။ ဆီ သွား ဝယ် ခိုင်း ထား ကြောင်း ။ သူ ငယ် ချင်း ဖြစ် သူ အား ခ ဏ စောင့် သွား ရန် ပြော ဆို ပါ တယ် ။ သူ ၏ အ မေ မှာ လည်း ။ ကျ မ အား ထို စဉ် အ ချိန် အ ခါ က ။ သူ ဋ္ဌေး ကြီး ၏ သ္မီး ဖြစ် နေ မှန်း တန်း သိ နေ သ ဖြင့် ။ ကျ မ အား အားတုံ ့အား နာ ဖြစ် ပြီး ။ လွန် စွာ ဆင်း ရဲ လှ သည့် ကျောင်း ဆ ရာ လ ခ စား မိန်း မ ဘ ဝ အ နေ ဖြင့် ။ လ ကုန် ခါ နီး အ လို ။ နံ နက် က တည်း က ပိုက် ဆံ ပြတ် နေ သ ဖြင့် ဈေး မ ဝယ် ရ ။ နေ့ခင်း ငွေ လေး ချေး ငှား ဆွဲ လို့ရ မှ သာ ။ ဆီ နှစ် ကျပ် ခွဲ သား ။ သ္မီး ဖြစ် သူ အား ဝယ် ခိုင်းထား ခြင်း ဖြစ် ကြောင်း ။ ရှင်း ပြ လို့နေ ပါ တယ် ။
သူ ၏ စာ အုပ် ထား ထား သည့် ဘု ရား စင် အောက် နေ ရာ လေး အား ။ သူ မ ၏ အ မေ က ပြ သ ဖြင့် ။ ကျ မ မှ လည်း အ လျှင် အ မြန် ရှာ ဖွေ နေ မိ ပါ တယ် ။ ကျ မ စာ အုပ် စင် လေး တွင် စာ အုပ် များ ရှာ ဖွေ နေ ခိုက် တွင် ။ သူ ၏ အ မေ က ။ ဆ ရာ မှာ လည်း စာ မေး ပွဲ ရှိ ၍ ကျောင်း မှာ အ လုပ် တွေ ရှုတ် နေ သည့် အ ပြင် ။ ပိတ် ရက် လည်း ကျောင်း သို့သွား ရ ခါ ။ အ လုပ် များ နေ ကြောင်း ။ မ နက် က တည်း က ပင် အိမ် မှာ ချက် စ ရာ မ ရှိ သ ဖြင့် ။ နံ နက် စာ ပင် မ စား သွား ရ ကြောင်း ။ ပြော ပြ ပြီး ။ ဟင်း ချက် ဖို့မီး မွှေး ရန် အ တွက် ဟု ပြော ဆို ခါ အိမ် အ တွင်း ထဲ သို့ဝင် သွား ခဲ့ ပါ တယ် ။
သူ ယူ ထား သည့် သူ ငယ် ချင်း စာ အုပ် များ အား ။ သူ ၏ စာ အုပ် ထား သည့် စင် က လေး တွင် ။ ကျ မ မှ မျက် ဝါး ထင် ထင် မြင် တွေ ့လိုက် ရ ပြီး ။ စာ အုပ် များ အား လက် ဖြင့် ကိုင် တွယ် ကြည့် နေ သည့် အ ခိုက် တွ င် ၊ ချ လွမ် ဆို သည့် အ ရာ တ ခု ကျ ကွဲ သည့် အ သံ အ ပြင် ။ အာ မေ ဋိက် အ သံ ဖြစ် သော “အ မေ့” ဟု လန့် ဖြန့်ခါ အော် လိုက် သည့် အ သံ နှင့် အ တူ ။ အိမ် လှေ ခါး အ ပေါ် ထပ် ဆုံး အ ဝ တွင် ရောက် နေ သည့် သူ ့အား ။ ကျ မ မှ ဘွား က နဲ မြင် လိုက် ရ ပါ တယ် ။
သူ ၏ အ မေ လည်း သူ ၏ လက် ထဲ မှ ဆီ ပု လင်း ကျ ကွဲ သွား သည့် အ သံ နှင့် အ တူ “အမေ့ ”ဟု ကျယ် လောင် စွာ အော် သံ ကြား လိုက် ရ သည့် အ သံ ကြောင့် ။ အိမ် အ ထဲ ထဲ မှ က မန်း က တန်း ပြေး ထွက် လာ ပြီး ။ ကျ ကွဲ သွား သည့် ဆီ ပု လင်း အား ကြည့် ပြီး ။ ရင် ပတ် စည် တီး လျှက် ။ သ္မီး ဖြစ် သူ ၏ တ ကိုယ် လုံး အား ဒဏ် ရာ ရ မ ရ ။ အ ထိတ် တ လန် ့ကြည့် ရင်း က ။
ဟင်း ချက် စ ရာ ဆီ မ ရှိ် တော့ သ ဖြင့် ။ ဒေါ သ ဖြင့် ။ သူ့ကို အော် ဟစ် ကြိမ်း မောင်း ပြီး ။ ကျွက် ကျွက် ညံ အောင် ဆူ ဆဲ ပါ တယ် ။
သူ မ က တော့ ။ ကျ မ လက် ထဲ က ။ ကိုင် ထား သော စာ အုပ် များ ကို ကြည့် ပြီး ။ က တုန် က ရီ ဖြစ် ခါ တောင်း ပန် တိုး လျှိုး သည့် ဟန် အ မူ အ ရာ နှင့် တ ကွ ခြေ မ ကိုင် မိ လက် မ ကိုင် မိ ဖြစ် သွား တာ တွေ ့မြင် လိုက် ရ ပါ တယ် ။ လက် ထဲ မှ ကိုင် လာ သော ဆီ ပု လင်း အား ။ လွှတ် ချ မိ လိုက် ခြင်း သာ လျှင် ဖြစ် မယ် လို့လည်း ။ကျ မ အ နေ နဲ့က ထင် မိ ပါ တယ် ။
ကျ မ လည်း ။ ထို သို့ဆင်း ရဲ သည် ကို ထို စဉ် အ ခါ က မ မြင် ဘူး ။ မ တွေ ့ဘူး ။ မ ကြုံ ဘူး သ ဖြင့် ။ စိတ် မ ကောင်း ကြီး စွာ ဖြစ် ခဲ့ မိ ပါ တယ် ။ သူ့မျက် နှာ ဇီး ရွက် ပ မာ ဖြစ် နေ မှု အား မြင် တွေ့ရ မှု အ ပေါ် တွင် လည်း ။ စိတ် မှ အ လို လို သ နား သွား မိ ပါ တယ် ။
ကျ မ ၏ ဒေါ သ ။ ကျ မ ၏ မာ န ။ ကျ မ ၏ မော ဟ ။ တ ရား တို့ရုတ် ချည်း ကွယ် ပျောက် သွား သ လို ပင် ။ သူ ၏ အ မေ မှ လည်း ကျ မ နှင့် သူ့ ၏ သ္မီး ကို ဝေ ခွဲ မ ရ နိုင် ကြည့် ခါ ။ တ ခု ခု ဘဲ ဟု စိတ် ထဲ အ တွေး ဝင် သွား ပြီး ။ နှစ် ယောက် သား မျက် နှာ အ မူ အ ရာ တို့အား ကြည့် ခါ ။ ဘာ ပြ ဿ နာ ဘာ ဖြစ် ထား ကြ သ လည်း ဟု ။ အ တင်း အ ကြပ် မေး မြန်း ခဲ့ ပါ တယ် ။
အ မှန် ကို ချစ် သော ကျ မ ။ အ မှန် ကို မ ဖုန်း ကွယ် ချင် သော ကျ မ ။ သူ ငယ် ချင်း ၏ ကြောက် ရွံ့တုန် လှုပ် နေ သည့် မျက် နှာ ။ ကျ မ အား မျက် လုံး ဖြင့် အ ပြစ် တို့အား ဖုံး ကွယ် ပေး ရန် ပြု ပြ နေ သည့် အ မူ အ ရာ ။ ဒါ တွေ ကို ကျ မ မြင် ပြီး ရုတ် ချည်း ဝေ ခွဲ မ ရ နိုင် ခဲ့ ပါ။ အ ဖေ ဆူ မည် စိုး သ ဖြင့် ပြော ပြ ပြီး ။ ရှင်း မ ပြ ခဲ့ တော့ ပါ ဘဲ ။ အိမ် ပေါ် က အ မြန် ပြေး ဆင်း ခဲ့ ပြီး ။ စက် ဘီး အ မြန် စီး နင်း လျှက် ။ အိမ် သို ့တက် သုတ် နှင် ပြီး ။ ပြန် လာ ခဲ့ မိ ပါ တယ် ။
ဘာ မ ဆို ရုပ် ဝါ ဒီ ကိုင် စွဲ ပြီး သိ ရ မှ ဖြစ် မည် ဆို သည့် ကျမ ၏ အ သိ ကြောင့် သာ မ ဟုတ် ပါ လျှင် … ။ ခွင့် မ လွှတ် နိုင် သည့် ကျ မ စိတ် ကြောင့် သာ မ ဟုတ် ပါ လျှင်……။ ကျ မ သိ ချင် သော လ က္ခ ဏာ အ ကြောင်း ရင်း ကြောင့် သာ မ ဟုတ် ပါ လျှင် …….။
ဆို သည့် အ တွေး များ စွာ တို ့က……. ။ ကျ မ အား နှိပ် စက် ၍ နေ ပါ သည် ။
သူ ကျောင်း ထွက် ရ မည် မ ဟုတ် ပါ ။ ဆ ရာ ကိုယ် တိုင် ။ သူ ၏ သ္မီး အား ။ ကျောင်း မှ ထုတ် ပစ် ခဲ့ တာ ကျ မ သိ လိုက် ရ ပါ တယ် ။။
ဟုတ်မှန် ၊ကျိုးမရှိ ၊သူတပါး နှစ်သက်/မနှစ်သက်ပေါ့နော်။
ကျောင်းထွက်ရတာ သူ့အပြစ်ပေမယ့် ဒီလို ပြစ်ဒဏ်ထိရစေတာတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ဟောပေးထားတာတွေ မှန်ပါတယ်နော် ၊ကျေးဇူးပါ။
အမ Aye.k.k ခင်ဗျာ…
ကျွန်တော်လက္ခဏာစိတ်ဝင်စားလို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက္ခဏာကိုပြောပြပေးပါလား
ဘယ်ညာ.လက်ဆယ်ချောင်းစလုံးမှာ ခရုပတ်ဗွေ ဆိုရင်ကော..ဟင်င်
ကျမရဲ ့အမက ကျမကိုကွန်မြူနစ်မ…
သူ ကျောင်းပြောင်းပြီးနေခဲ့တာပဲလို ့အောင်းမေ့ မိခဲ့တာ…
နောင်တချိန်သူနဲ ့ကျမပြန်ဆုံတော့မှအဖေကသူ ့ရဲ ့
အသက်နဲ ့ထပ်တူတန်ဘိုးထားလို ့..
သူ ့အမေကအဖြစ်မှန်သိရာကနေအဖေ့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်မိလို ့
အစစ်လို ့ပြောတာကခရုပတ်ဗွေလျှောနဲ ့မှားမှာစိုးလို ့ပါ..
မိမိရဲ ့စိတ်တံခိုးထက်မြက်မှု (စွမ်းအား)မြင့်မားတယ်လို ့မှတ်သားဘူးပါတယ်
စီးပွားကူးသန်း၊မိမိရဲ ့အောင်မြင်ကြိုးစားမှုနဲ ့ပတ်သက်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်..
လက္ခဏာကိုတော့အစ်မ mail ထဲကိုပို့ပေးလိုက်မယ်နော်…
ခရုပတ်ဗွေ(အစစ်) နဲ့ ခရုပတ်ဗွေလျှောက
လွယ်အိပ်တစ်လုံးလွယ်ပြီးအန်တီတို ့ရဲ ့မြို ့ဆေးဆိုင်မှာဆေးအမြဲလာဝယ်နေတဲ့သူရှိတယ်
အန်တီသူငယ်ချင်းကအန်တီနေတဲ့ကျိုက်ထိုမြို ့ရှမ်းစုရပ်ဂန့်ဂေါ်လမ်းနဲ ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမထိတ်
လူကဆေးဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျိုက်ထို-ရန်ကုန်အမြန်ရထားစီးဘို ့ဘူတာကြီးနဲ ့နီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အန်တီသူငယ်ချင်းဆိုင်မှာရထားစီးဘို ့စောင့်ရင်းနဲ ့လဘက်ရည်အမြဲလာဝင်သောက်တယ်
ခင်သွားတယ်ဒါနဲ ့စကားအတင်းစပ်မေးရာကဆေးပစ္စည်းနဲ ့ပတ်သက်တဲ့အဝယ်တော်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်..
လက်ဖဝါးတောင်းကြည့်ရင်း အဲဒီလူကြီးရဲ ့လက်မှာခရုပတ်ဗွေဆယ်ချောင်းတောင်ပါတာ
တစ်နေ ့ကျရင်အသက်(၃၃)ပါတ်ဝန်းကျင်မှာကံရဲ ့ပြောင်းလည်းမှုတွေ ့မြင်ရတဲ့အပြင်ခရုပတ်ဗွေဆယ်ချောင်းပါတာတွေ ့ရလို ့ချမ်းသာမှာမုချဧကန်
အဲဒီအချိန်ကသူ ့ရဲ ့အသက်(၂၆)နှစ်၊အန်တီက(၁၃)နှစ်သ္မီးအရွယ်ပါ..
တနေ ့တော့တိုက်ဆိုင်စွာနဲ ့အန်တီအသက်(၂၀)ရန်ကုန်မှာနေရင်းဗိုလ်ချုပ်ဈေးရှေ ့မှာ
သေချာအောင်ဆိုပြီးမယုံနိုင်လွန်းလို ့ဆိုပြီးကားခဏရပ်လို ့ဆင်းမေးရင်း..
အဲဒီတုံးကကျမဟာသူဋ္ဌေးသ္မီးလေးတစ်ဦးဖြစ်နေခဲ့တာကိုစုံစမ်းသိခဲ့ရလို ့မခင်ရဲ ခဲ့တာအမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊အဖေ့ဂုဏ်ရှိန်ဩဇာရှိတာသူသိခဲ့ပါကြောင်းပြောပြပါတော့တယ်..။
ဘယ်ညာ လက်မ နှစ်ဘက်မှာ ခရုပတ်ခွေ ပါတယ်။
လက်မ နှစ်ချောင်းလုံးမှာ သူများတွေ ပြောတာတော့ စပါးစိ လို့ပြောတယ်.. အဆစ်ချိုးတဲ့ ပထမ အဆစ်မှာ ပါတယ်။
လက်ဝါးမှာလည်း လက်သူကြွယ် နဲ့ လက်သန်းကြား လောက်မှာ ခရုတ်ပတ် တခုစီပါတယ် ဘယ်ညာမှာ..
ဒီနေရာမှာတော့ ရှုပ်တော့မှာဘဲ။ ကျုပ် လက်ဖဝါးမှာလဲ အရေးကြောင်းတွေက အန်တီအေး ပြောတဲ့ဟာ ပါနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါပေသည့် အခုချိန်အထိတော့ ဇါတ်လမ်းထဲကလို မလုပ်ဖူးသေးဘူး။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်ခုံ မှာအခြားမည်သည့်လမ်းကြောင်းနဲ ့မှစပ်ယှက်နေရခြင်းမရှိရပါဘူး..
အခြားလမ်းကြောင်းများနဲ ့လုံးဝမပတ်သက်ဘဲသီးသန် ့ဖြစ်တည်နေပြီး ကြက်ခြေခတ်အသေးစားလေးကိုမြင်တွေ ့ရမှသာအကျုံးဝင်ပါတယ်..
သားထင်ရှားစွာမြင်ရတဲ့လက်ပုံလေးပို ့ပေး စေချင် ပါတယ်..။
အန်တီအေးရေ ဗဟုသုတအနေနဲ့ မှတ်သားရပါတယ် ။
တော်သေးတယ် .. အဲ့ဒီလို သူခိုးနက္ခတ်လေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး မမွေးလို့ ရယ် ..ဟီး
လက်ဖဝါးပြင်က အရေးကြောင်းတွေကို … ပညာရှင်တွေက ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ကံကြမ္မာ အဆိုးကောင်းခွဲလို့ ရတယ်လို့ပြောတာ ..ဟုတ်လား ဟင် … ။
မိမိသာလျှင်မိမိကံကိုပြုပြင်နိုင်တာမို ့မိမိရဲ ့အပေါ်မှာသာမူတည်နေပါတယ်..
သဂျီးဂိုဘဲကြိလေ.. ပတ်ဝန်းကျင် မမှန်ဒေါ့… ပြောလော့ဝူး အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်
အန်တီအေးရေ … ကျွန်မကျတော့ … လောင်းကစား အကျိုးမပေးဘူး .. ။ ဆရာလေးတစ်ပါးက လက်ကိုကြည့်ပြီးပြောဖူးတယ် …. ။ သူပြောတုန်းက မယုံဘူး … ။ လောင်းကစားဆိုတာ .. အဆိုးနဲ့အကောင်းတလှည့်စီလို့ …. တွေးပြီး … ဆော့ခဲ့တယ် .. ။
တက္ကသိုလ်တက်ရင်း ဖဲရိုက်တတ်ရာက ….. မောင်နှမတွေစုပြီး … အကြွေလေးတွေနဲ့ ဆော့တာမျိုး ၊ ယောက်မတွေနဲ့ စုပြီးဆော့တာမျိုးကနေ … ကိုယ့်အမျိုးတွေ အဆွေတွေ သေကြည့် … အမျိုးအိမ်သွားပြီး (နယ်ထိ) …. ဆော့တဲ့အထိ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် … ။ ဝါသနာပါတာထက် … ကံကြမ္မာဆိုတာကို မယုံတာလည်း ပါတာပေါ့လေ … ။ ဆော့တိုင်းရှုံးတယ် .. ရှုံးလို့လည်းထပ်ဆော့တယ် . ကြောင်ကြာကြာရေမငုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ … ကြုံးဝါးသံနဲ့ပေါ့ …. ။ ကြုံရဖန်များလာတဲ့အခါ … လုံးဝကို လက်ခံလိုက်ရတယ် … ။ လောင်းကစားအကျိုးမပေးဘူးဆိုတာကိုပါ … ။ ဒါကိုမယုံလို့ ထပ်ဆော့လျှင် … တပြားမှ ကုန်းကောက်စရာရှိမယ်မထင်တော့ဘူးလေ …. ။ ပွဲတိုင်း ရှုံးခဲ့ပါတယ် .. အဲ့ဒါကိုယ်တွေ့ပါ … ။
လက္ခဏာတွေကိုသူများပြောင်းလို့ မရဘူးဆိုလို့ … ကျေနပ်မိပါတယ် .. ။ ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း … ကိုယ်ပိုင် လက္ခဏာပဲ ဖြစ်ချင်မိလို့ပါ … ။
စကားမစပ် အန်တီအေးရေ … ကျွန်မရဲ့ ဘယ်ဘက်လက်ဖဝါး လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကြားထဲက လက်ဝါးပြင်နေရာ x လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ် ကြားနေရာ … အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာ လောက်မှာ 1cm ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ … ငါးထောင့်ကြယ်ကြီးပါနေတယ် …။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တတ်သလဲဟင် ..
မအေးရေ ပို့ပေးလိုက်ပါမယ် ။.
အန်တီအေး ရေ နောက်ထပ်လည်း ဒီလိုဗဟုသုတလေးတွေ ထပ်ရေးပါအုန်း။ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
အန်တီအေး ပြန်ဖြေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်